Tokyo Olympics: Wax Ka Baro Toddobada Hcaween Oo Olompikada ka qaybgalay Ee Saynisyahannadana ah | Gaaroodi News
Tokyo Olympics: Wax Ka Baro Toddobada Hcaween Oo Olompikada ka qaybgalay Ee Saynisyahannadana ah
Hadia Hosny (bidix) waa saynisyahan iyo siyaasi
Hal il waxa ay ku hayeen dhankaa iyo tababarka, ta kalena shaybaadhka: tan waa habdhaqanka koox dumar ah oo la soo xulay oo wacdaro ka dhigay iyo jidadka Olombikada Tokyo.
Waxay la kulmeen caqabad u gaar ah: inay ku tartamaan heerka ugu sarreeya riyaga oo baadigoobaya billadaha ugu sarreeya, halka dhanka kalena ay ku jireen xirfadooda dhanka sayniska.
Halkan waxa ku xusan toddoba magac oo ka soo dhex muuqday
Kiesenhofer’s guusheedii baaskiilka waxa uu ahaa mid ka mida waxyaalihii lama filaanka ahaa ee dhacay
30-jirka Austrian-ka ah ee baaskiilka ciyaarta ayaan ka mid ah liiska kuwa ugu cadcad tartanka waddooyinka haweenka ee Tokyo.
Inkasta oo ay ahayd tababare la’aan, taageerana aanay ka haysan cid weyn oo la yaqaan ayaa keensatay in ay cadho ku abuurto tartamayaal badan kaddib markii ay ku guulaystay billadda dahabka.
Horyaalka Olombikada ee 2021 ayaa ay kaalmaha hore gashay, waana xisaabiye haysata shahaadada Jaamacadda Farsamada ee Vienna iyo Jaamacadda Cambridge, UK.
Waxay hadda ka shaqeysaa cilmi baaris iyo waxbarid Jaamacadda Farsamada Lausanne, Switzerla
2. Hadia Hosny (Masar)
Ciyaaraha Olombikada Tokyo ayaa laga yaabaa inuu ahaa tartankii ugu dambeeyay ee Hosny.
Ka dib markii lagu reebay wareega group -yada ee tartankakubadda gacanta ee haweenka, Masaariyaddan ayaa ka dhawaajisay hawlgab in ay qorshaynayso.
“Waxaa jirta suurtogalnimo weyn oo ah in kuwani ay ahaayeen ciyaarihii Olombikada ee iigu dambeeyay. Aad bay u walaac badan tahay inaan u safro dhammaan tartamada oo aan naftayda meel fiican ka helo qiimeynta adduunka,” ayaa a tidhi sida laga soo xigtay website -ka rasmiga ah ee IOC.
Laakiin Hosny waxay sii wadi doontaa xirfadeeda waxbarasho. Waa kaaliye bare -sare ka ah Jaamacadda Ingiriiska ee Masar.
Iyada oo haysta shahaadada masterka ee biomedicine oo ka socota Jaamacadda Bath, UK, iyo dhakhtar ku takhasusay cilmiga dawooyinka ee Jaamacadda Qaahira, Waxay baadhay oo daabacday maqaallo ku saabsan dexamethasone, oo ah daw ka hortagta bararka oo loo isticmaalo cudurro kala duwan.
Jadwalka Hosny ayaa sidoo kale waxaa buuxin doona siyaasadda, maadaama ay tahay xubin ka tirsan Baarlamaanka Masar.
3. Gabby Thomas (Mareykanka)
Gabrielle Thomas, oo 24 jir ah, waa magac caan ka ah orodka – waa haweeneyda saddexaad ee ugu orodka badan abid 200m.
Waxaa loo yaqaan Gabby, waxay ku guuleysatay bilad naxaas ah ciyaarihii Tokyo.
Laakiin inta u dhaxaysa tababarka iyo tartamada, Thomas wuxuu sidoo kale Jaamacadda Harvard ka bartay neurobiology iyo caafimaadka adduunka.
Thomas waxa ay hadda raadinaysaa shahaadada mastarka cilmiga faafa iyo maamulka caafimaadka Jaamacadda Texas ee Austin.
Danta ugu weyn ee cilmi -baaristiisuna waa sinnaan la’aanta jinsiyadda ee helitaanka adeegyada caafimaadka ee Mareykanka.
4. Charlotte Hym (Faransiiska)
Dr Hym nasiib darro ma ay agadhin tartankii kama danbaysta ahaa
Markii ay 12 jir ahayd, haweeneyda u dhalatay Faransiiska ee Charlotte Hym ayaa aad ula dhacday dadka barafka ku dul ordayey meel u dhow gurigooda oo ku yaalla Paris.
“Waxay u muuqatay mid aad u qabow oo waxaan doonayay inaan sidaas oo kale sameeyo,” 28-jirka ayaa u sheegtay Website-ka Guddiga Olombikada Caalamiga ah (IOC).
Hym waxa ay ku dhammaysatay in ay ku tartanto ciyaartii ugu horreysay ee Olimbikada ee barafka, laakiin sidoo kale waxay timid Tokyo iyadoo ah dhakhtar ku takhasusay neerfaha.
Waxay baadhaa saamaynta uu codka hooyadu ku leeyahay kobcinta xirfadaha dhaqdhaqaaqa ee dhallaanka cusub.
Dr Hym ayaa si murugo leh looga cidhibtiray wareegii isreebreebka ee ciyaaraha barafka.
5. Louise Shanahan (Ireland)
Shanahan 800m ayay ku tartantayTokyo
Orodyahanadda reer Irish oo 24 jir ah ayaa maankeeda haysay qorshe cad: si ay ugu qalanto ciyaaraha Olombikada ee Paris 2024.
Laakiin natiijooyinka ayaa yimid si ka dhakhso badan sidii la filayay waxayna boos ka ballansatay orodka 800m ee Olombikada Tokyo, inkasta oo Shanahan aysan dhaafin kulaylkii ugu horreeyay ee isreebreebka.
In kasta oo qorshayaasha isboortiga ee 2024 ay wali taagan yihiin, haweeneyda Irish -ka ah ayaa hadda u jeedsanaysa sayniska – fiisigiska ayay si gaar ah u danaysaa
Shanahan oo ka qalin jabisay Jaamacadda Cork, oo ku taal dalkeedii hooyo, ayaaa shahaado ka wadataa Jaamacadda Cambridge.
Danta ugu weyn ee ay leedahay waa fiisikiska caafimaadka: waxay baratay oo horumarisaa aalado hagaajin kara ogaanshaha iyo daweynta kansarka.
6. Nadine Apetz (Germany)
Waxa ay halgan ugu jirtaa in daawo u keento cudur jira
Markay gasho giraanta Tokyo, Apetz waxay durba sameysay taariikh: waxay noqotay wakiilkii ugu horreeyay ee Jarmalka ee ku metesha feedhka dumarka Olombikada.
Laakiin 35-jirkan waxay lahayd waayo-aragnimo gaaban oo Olombikada ah: waxay guuldaro kala kulantay Lovlina Borgohain oo reer Hindiya ah.
Iyada oo bilado ka haysata tartamada Yurub iyo Koobka Feedhka Adduunka, waxay se hadda damacsan tahay in ay xoogga saaro xirfadeeda kale.Waxay haysataa shahaadada mastarka ee neerfaha ee Jaamacadda Bremen, oo ku taal dalkeeda, hadafkeeda xiga waa inay dhammayso dhakhtar ku yaal Isbitaalka Jaamacadda ee Cologne, ee sidoo kale Jarmalka ah.
“U diyaargarowga Olombikada Tokyo wuxuu ahaa mid aad u walaac badan. Markii aan ka soo laabto Japan, waxaan xoogga saari doonaa 100% waxbarashadayda,” Apetz ayaa u sheegay website -ka IOC.
Andrea Murez waxay haystaa shahaadada koobaad ee biology jaamacadda Stanford University
California- ayay ku dhalatay Andrea Murez, oo 29 jir ah, waxay ka qalin jabisay bayoolajiga Jaamacadda Stanford.
Dabaashu, si kastaba ha ahaatee, waxay u oggolaatay inay ka qayb gasho tartamada biyaha ee Maccabiads, oo ah dhacdo isboorti oo la abaabulay oo kor loo qaaday afartii sanaba mar kana dhacda Israa’iil.
Ka dib markii uay samaysay bandhig fiican, Murezwaxay go’aansatay inuu si joogto ah ugu guurto Israa’iil oo ay metesho waddanka.
Ciyaarihii Olombikada ee Tokyo, orodyahannaddan, bayoolaji-yaqaanka iyo dhakhtarka mustaqbalkaa natiijadeedii ugu fiicnayd waxay ku timid is -reeb -reebka, oo kooxda Israa’iil ay ku dhammeysatay kaalinta siddeedaad ee finalka